Arimaha Dowlada • Warka Warshadaha Martigelinta • Wararka Booqashada Caalamiga ah • Fursadaha maalgashi • Wararka safarka Talyaaniga • Shirka Warka Warshadaha • kale • dib u dhiska safarka • Seychelles wararka safarka • Wararka Dalxiiska • Hadalka Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Wararka Safarka • Sirta Safarka • Tiknoolajiyadda Safarka
Seychelles waxay muuqaal muuqaal ah ka sameysaa BIT 2021
Bogga ugu weyn » posts » Wararka Booqashada Caalamiga ah » Seychelles wararka safarka » Seychelles waxay muuqaal muuqaal ah ka sameysaa BIT 2021
Jasiiradda loo socdo, iyada oo loo marayo Xafiiska Dalxiiska Dalxiiska Seychelles ee Talyaaniga, ayaa kaqeybqaadatay daabacaadda meheradda ah ee ganacsiga iyo bandhigga macaamiisha BIT (Borsa Internazionale Turismo) 2021, oo laga qabtay khadka tooska ah May 9-14.
Isdhexgalka waxaa fududeeyay Expo Plaza, oo ah barxad dijitaal ah, oo ka kooban goob bandhig muuqaal ah oo ay ku soo bandhigaan waxqabadyadu inay ku xoojin karaan multimedia iyo waxyaabo kale.
BIT Wadahadalada goobta shirku lagu soo bandhigayo in ka badan 90 munaasabado qulqulaya iyada oo diiradda la saarayo dhacdooyinka heerka sare ah.
MyMatching waxay u shaqeysay sidii barxad loogu talagalay soo bandhigida iyo shirarka ganacsiga qarsoodiga ah ee udhaxeeya dalabka iyo baahida, halkaas oo iibsadayaasha iyo iibiyeyaashu ku wada hadli karaan fiidiyow.
Waxaa lagu soo bandhigayay 6-maalin show digital ah ahaayeen 1,530 ciyaartoy warshadaha dalxiiska, kuwaas oo u heellan 3 maalmood ganacsiga iyo inta kale ee macaamiisha.
Isdhexgalka waxaa fududeeyay Expo Plaza, oo ah barxad dijitaal ah oo leh 3 kanaal, taas oo ka koobneyd goob bandhig muuqaal ah oo ay soo bandhigayaashu ku xoojin karaan multimedia iyo waxyaabo kale si ay u soo bandhigaan waxyaabaha ay bixinayaan halka ay u socdaan, shabakad ay la wadaagaan hawlwadeenada isla markaana ay la falgalaan socdaalayaasha.
Goobta Shirka BIT Talks ayaa lagu soo bandhigay in ka badan 90 munaasabadood oo qulqulaya iyada oo diiradda la saarayo dhacdooyinka heerka sare ah ee Wadahadalka BIT Gaarka ah. Intaa waxaa sii dheer, Beesha BIT, isbeddelka khadka tooska ah ee MyMatching, wuxuu u shaqeeyay sidii madal loogu talagalay soo bandhigida iyo shirarka ganacsiga qarsoodiga ah ee u dhexeeya saadka iyo baahida, halkaas oo iibsadayaasha iyo iibiyeyaashu ku sheekaysan karaan sheeko fiidiyoow ah.
The Jasiiradaha Jasiiradda Seychelles waxay lahaayeen mowqif macmal ah oo booqdayaashu ay ku heli karaan macluumaadka iyada oo loo marayo qoraallo, fiidiyowyo, sawirro, buugaag, iyo agabyada kale ee suuqgeynta ee ku saleysan meesha loo socdo